basic of C# (part 24) | our notes for our youngers
basic of C# (part 24)
Filed under: Basic of C# — Tags: .NET, C#, Data Hiding, Encapsulation, inheritance, OOP, Polymorphism, programming — sevenlamp @ 9:55 AM
ကဲ ဒီနေ့တော့ database အပိုင်းလေး ခဏနားပြီး C# ဘက်ကို နည်းနည်းပြန်လှည့်အောင်။ ကျွန်တော်တို့ အခုနောက်ပိုင်း programming language မှာ အသံကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ဖြစ်လာတာက OOT လို့ ခေါ်တဲ့ Object-Oriented Technique ပဲဖြစ်ပါတယ်။ OO မှာ ဘာတွေပါလဲ…
အမွေဆက်ခံခြင်းလို့ ခေါ်တဲ့ inheritance၊
Data hiding လို့ခေါ်တဲ့ member data တွေကို သိုဝှက်သိမ်းဆည်းထားခြင်း၊
Encapsulation သိမ်းဆည်းထားတဲ့ member data တွေကို တဆင့်ခံဖြင့် သုံးခွင့်ပေးခြင်း၊
စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ.. အဲ့ဒါတွေ ပါပါတယ်။
ဒီလိုလေးတွေးကြည့်ရအောင်ဗျာ အခုကျွန်တော်တို့ မိဘတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပါပဲ။ ဒီလိုပါပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေက ပိုင်ဆိုင်ကြဦးမှပါ။ ဒီသဘောတရားလေးကို ယူပြီး OOမှာ inheritance ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ class တစ်ခုရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု property တွေဟာ အဲ့ဒီ class ရဲ့ child တွေကလည်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့က class တွေအားလုံး အတွက် တူညီတဲ့ property တွေကို အကြိမ်ကြိမ်ကြေငြာပေးနေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ဥပမာဗျာ ကျွန်တော်က လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ်စားပြုမယ့် class တစ်ခုဆောက်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ class ထဲမှာ ဘယ်လို member တွေပါမလဲ စဉ်းစားကြည့်၊ နံမည်ပါမယ်၊ အသက်ပါမယ်၊ နေရပ်လိပ်စာပါမယ်ဗျာ၊ စသည်ဖြင့်ပေါ့။
ကဲ…အခု နောက်တစ်ခါ ကျွန်တော်က ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ကိုယ်စားပြုမယ့် class တစ်ခုထပ်ဆောက်ဖို့ လိုလာပြီဆိုရင်ရော ဘယ်လို member တွေပါမလဲ၊ ကျောင်းသားမှာလည်း နံမယ်ပါမယ်၊ အသက်ပါမယ်၊ လိပ်စာပါမှာပါပဲ၊ ကျောင်းသားမှာ ပိုပါလာတာက roll နံပါတ်ပါမယ်၊ class ပါပါမယ်။
ဟုတ်ပြီ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ နံမည်တို့ အသက်တို့ကို ထပ်ပြီး မကြေငြာချင်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Student class ကို People class ရဲ့ child အဖြစ် ကြေငြာလို့ ရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးပါ…
class Student : People
ဒါကို inheritance လုပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ inheritance လုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် People class ထဲက member data ကို Student class ထဲမှာ ပြန်ပြီ ကြေငြာပေးနေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက်ကို သိထားဖို့ လိုပါသေးတယ်။ ဒီလိုဗျာ ကျွန်တော်တို့ မိဘရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံး ကျွန်တော်တို့ရမလား၊ မရပါဘူး သူတို့ ကိုယ်ပိုင်အတွက် သိမ်းထားတာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ C# language မှာလဲ အဲ့ဒီလိုမျိုး ခွဲခြားဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ Access Modifier ဆိုတာကို သိဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ C# language မှာ access modifier ၅ မျိုးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေ ကတော့
– public ( အများသုံး )
– protected ( မိမိနှင့်child တွေသုံး )
– private ( မိမိကိုယ်တိုင်သုံး )
– internal ( library တူအတွင်းသုံး )
– protected internal ( child ဖြစ်လျှင်၎င်း၊ library တူလျှင်၎င်း သုံး )
စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်က example People class လေးမှာ ကျွန်တော်တို့ access modifier မထည့်ပေးလိုက်ပါဘူး။ ဒါဆိုရင် default အနေနဲ့ private ပါ။ ဒါကြောင့် People class ထဲက member data သုံးခုက people class အတွင်းမှာပဲ သုံးခွင့်ရှိပါတယ်။ Student မှာ သုံးလို့ မရပါဘူး။ အခုကျွန်တော်တို့က Student class ထဲကနေပါ သုံးခွင့်ရချင်တာဖြစ်လို့ protected member အဖြစ်ကြေငြာပေးရမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်တွေမှာ လုပ်လေ့ရှိတယ်ဗျာ တခါတလေ ရပ်ကွက်ရုံး ကနေပြီးတော့ တစ်အိမ်ကို လူတစ်ယောက်နှုန်း အစည်းအဝေးတက်ရမယ်တို့ ဘာတို့ ကြုံဖူးမှာပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့ ရပ်ကွက်ရုံးက ခေါ်တာက လူတစ်ယောက်လို့ ခေါ်တာပါ တနည်းအားဖြင့် people class ကို ခေါ်တာပါ။ အဲ့ဒါကို အိမ်မှာ ရှိနေတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က သွားတက်လို့ မရဘူးလား၊ ရပါတယ်။ Teacher တစ်ယောက်သွားတက်မယ်ဆိုလို့လဲ ရပါတယ်။ Teacher ကလည်း people တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် Student ပဲ သွားသည်ဖြစ်စေ၊ Teacher ပဲသွားသည်ဖြစ်စေ၊ ဒါမှမဟုတ် People ကိုယ်တိုင်ပဲ သွားသည်ဖြစ်စေ၊ အားလုံးကို People လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ အားလုံး အခွင့်အရေးတန်းတူပါပဲ။ Student မို့ အခွင့်အရေးပိုရမလား မရပါဘူး။ အိုကေ အဲ့ဒီလိုမျိုး People ကိုခေါ်တာကို Stuent သွားလိုက်တာကို အသွင်ပြောင်းလဲခြင်း ( polymorphism ) လို့ ခေါ်ပါတယ်။
p = new Student();
Polymorphism မှာ သတိထားရမည့် အချက်ကတော့ child ကို parent အသွင်ပြောင်းနိုင်ပေမယ့် parent ကိုတော့ child အဖြစ်ပြောင်းလို့ မရပါဘူး။ ဆိုလိုတာကတော ကျောင်းသားအားလုံး စာမေးပွဲလာဖြေပါဆိုပြီး ခေါ်တာကို အိမ်မှာ ရှိတဲ့ လူကြီးတွေသွားဖြေလို့ ရမလား မရပါဘူး၊ ဒီသဘောပါ။ Student ကိုတောင်းရင်တော့ People ပေးလို့ မရပါဘူး၊ Student ပဲ ပေးမှ ရမှာပါ။
Data hiding ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ အိမ်မှာ မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို တခြားလူတွေသိအောင် ထုတ်ကြေငြာလေ့ရှိလား? မရှိပါဘူး တိတ်တိတ်လေးပဲ သိမ်းထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီသဘောပါပဲ class တွေထဲမှာရှိတဲ့ member data တွေကိုလည်း အပြင်ကနေ ခေါ်လို့မရအောင် private လုပ်ထားခြင်းကို data hiding လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဥပမာဗျာ အခု student class ထဲမှာ roll နဲ့ class ပါတယ်မလား၊ အဲ့ဒီ member data တွေကို အပြင်ကနေ ခေါ်သုံးလို့ မရပါဘူ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ private member data တွေ ဖြစ်လို့ပါ။ ဒီလိုမျိုး class member data တွေကို private အဖြစ်ပဲ ကြေငြာတာကို Data Hiding လို့ခေါ်ပါတယ်။
Encapsulation ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ hide လုပ်ထားတဲ့ data ထဲက လိုအပ်တဲ့ dataတွေကို function တွေကနေသော်လည်းကောင်း၊ property တွေကနေတဆင့်သော်လည်းကောင်း၊ အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် စီမံပေးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ C# မှာတော့ member data တွေကို ကိုယ်စားပြုဖို့အတွက် property တွေကိုသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးပါ..
public int RollNo
You know, most of programmers cant
explain tat four oop things clearly.
I am attending an asp.net class and frankly tutors in tat place can’t explain well with tat matter.Watasurprise?I think u have big experience in this field.
I am not making u big.
Comment by kevin — September 30, 2009 @ 7:55 PM
အခုကျွန်တော်ပြောနိုင်တာတွေ အားလုံးဟာ ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ ဆရာကောင်းကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ ဘာမှ သေချာ မတက်ပါဘူးဗျာ။
Comment by sevenlamp — October 1, 2009 @ 9:29 AM